Archive du 20180925
Ravalomanana ho filoha Manetsika ny Malagasy maneran-tany
Manetsika ny mpomba azy sy ireo mpanohana azy na ny eto an-toerana na ny any ivelany ny kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana.
Jean Eric Rakotoarisoa “Tsy azo ahemotra ny fifidianana”
Tsy maintsy hajaina ny daty napetraky ny lalàmpanorenana, hoy ny filohan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) omaly,
Volom-boasary milaza ho mpandresy sahady Mahafaly ny mpivoy adim-poko, hoy ny Fitoniana Tour
Vonona hiatrika fifidianana izahay, hoy ry zareo avy eo anivon’ny fikambanana Fitoniana Tour tamin’ny alalan’ny filohany, Sambahita.
Diso amin’ny lisi-pifidianana Noho ny olana ara-pitaovana ?
Nandritra ny atrikasa nanaovana tombana tamin`ireo ezaka efa vita mahakasika ny fikarakarana fifidianana dia nilaza ny OIF fa vita soa aman-tsara ny fanisana sy fanaraha-maso na “audit” fa ara-dalàna izany.
Fikambanana OHT Manohana an`i Mahafaly Olivier
Hanohana ny kandidà Solonandrasana Mahafaly Olivier, izay mitondra ny laharana 22, ny fikambanana Olon`ny Hasin`ny Tany (OHT) mandritra ny safidim-bahoaka ny 07 novambra ho avy izao.
Fikambanana OHT Hanampy tosika an`I Mahafaly Olivier
Hanohana ny kandidà Mahafaly Olivier, izay mitondra ny laharana 22, ny fikambanana Olon`ny Hasin`ny Tany (OHT) mandritra ny safidim-bahoaka ny 07 Novambra ho avy izao..
Tetezamitan-dRajoelina Tena namotika firenena
Misy amin’izao fotoana ny totoafon-tserasera ezahana atao mba hampisongadinana indray ireo olona namotika ny firenena, noho ny fanonganam-panjakana natao teto ka nitarika ny fijoroan’ny fitondrana tetezamita (2009-2013).
Tsy fanajana ny satan’ny kandida Tsy misy sazy , hoy ny CFM
Natao hameno ny lalàna fotsiny ihany, hoy ny filohan’ny komitin’ny fampihavanana Malagasy, Maka Alphonse,
Praiminisitra Ntsay Christian Nanamafy fiaraha-miasa amin`ny mpandraharaha solika
Notanterahina teo ambany fitarihan’ny praiminisitra Ntsay Christian, ny fanaovan-tsonia fifanarahana teo amin’ny governemanta Malagasy,
Ramora Favori Manohana ny fandaharan’asan’i Paul Rabary
Anisan’ny mpanakanto malaza tena nifandrombahan’ny kandida tokoa Ramora Favori taorian’ny nivoahan’ilay hirany rademi-tour.
Vondrona mpanarato olona raitra Nanolotra soso-kevitra ho an’ireo kandida hilatsaka ho filoham-pirenena
Andro vitsivitsy sisa no isaina dia hianoka tanteraka ao anatin’ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena isika eto Madagasikara.
Voka-pifidianana filoham-pirenena Tokony hihetsika hampanao Dina an’ireo kandidà ny CENI
Tany Moramanga tao anatin’ny lanonam-pamaranana ny fifaninanana rallye RIM 2018 tamin’ny sabotsy 22 septambra teo no nanambaran’ny depiote Randriamahefa Henri Charles voafidy tany amin’ity distrika ity fa efa tokony hihetsika amin’izay ny CENI,
Rodoben’ny Zay Gasy Sahy Mandroso Nahemotra amin’ny 6 oktobra indray
Voatery nahemotra amin’ny sabotsy 06 oktobra izao indray ilay hetsika “Zay Gasy Sahy Mandroso” nokasain’ny fikambanana Za’Gasy natao ny sabotsy 22 septambra teo ho fankalazana ny tsingerin-taona faha-2
Vatsim-pianarana Britanika Miantso ireo Malagasy te handalina ny “Leadership”
2 taona taorian’ny nitsanganan’ilay fandaharam-pamatsiam-pianarana Britanika “Chevening scholarship”, izany hoe, ny taona 1985 no nanomboka nisitraka ny vatsim-pianarana momba izany koa i Madagasikara.
Sehatra angovo Antony voalohany mahatonga ny fiovaovan’ny toetr’andro
Sehatra tsy azo ihodivirana ankehitriny ny sehatra angovo satria mifandray tanteraka amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy.
Farihin’Andraikiba Nahafaty olona ny fanaovana “Selfie”
Namono olona indray ny farihin’Andraikiba. Tovolahy roalahy antsoina hoe Ranja sy Nanja indray no niara-maty an-drano tao Andraikiba omaly alatsinainy 24 septambra 2018 tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro.
Hira fiderana Feo malefadefaka no hihirana azy
Nahita masoandro ny andiany ANTEMA, vokatra voalohany eto Antananarivo tamin`ny fampianarana mihira ny Cours de Chant Hery Andriatahina (CCHA).
Manasa-dalan’ny « Telma Coupe de Madagascar » Etsy Mahamasina no fotoana amin’ny alahady izao
Taorian’ny andro faran’ny lalao poule des As notanterahina teny Vontovorona tamin’ny alahady 23 septambra lasa teo izay niteraka resabe
Basket Vehivavy -U 16 any Farafangana Mitarika ny Cospn 2 Atsinanana sy Mb2All Analamanga
Mitarika an’isa ny vehivavin’ny Cospn 2 Atsinanana ao amin’ny vondrona A sy ny Mb2All Analamanga ao amin’ny vondrona B taorianan’ireo andro roa
Baolina kitra vehivavy tany Itasy Lasan’ny kaominina Betanimena Ambohikinga ny amboara
Tao amin’ny kianjan’ny Oniversite Faliarivo, Distrikan’ny Soavinandriana Faritra Itasy, no notanterahana ny lalao famaranana baolina kitra vehivavy Fisandratana ny alahady 23 septambra 2018 lasa teo.
Rugby Amboaran’ny Fifankatiavana Lasan’ny CPI Isotry ny omby mifahy
Lasan’ny fileovana CPI Isotry ny omby mifahy natao amboara teo amin’ny lalao rugby niadiana ny amboaran’ny Fifankatiavana nokarakarain’ny seksion’ny
FIKAMBANANA TERRES EN MELEES Nahazo ilay mari-pankasitrahana « le prix Beyond Sport Global Award »
Fikambanana iray miezaka mampiroborobo ny taranja Rugby ho an’ny vehivavy ny fikambanana « Terres en mêlées ».
Izao izany ve vao hampianatra ireo mpanao politika hifanaja ireo najoro ho mpampihavana eto amin’ny firenena sa mba hahafahana manakona fotsiny hoe tsy misy atao dia mba mody mamoromporona ity resaka sata sata sy dina ity izy ireo ?
Kaominina Ampitatafika Mahazo vahana indray ireo jiolahy mitoraka môtô scooter
Marisarisa ihany ny fandriampahalemana ho an’ny kaominina Ampitatafika, distrikan’Antananarivo Atsimondrano na dia tsy misy aza ny fanafihana mitam-piadiana raha araka fanazavan’ny Ben’ny tanana Rado Ramparaelina.
Hifandrombahan’ny kandidà ny fangalana mpiambina akaiky, taorian’ilay filankevitry ny minisitra nanome alalana azy ireo ny hisitraka izany.
Etsy amin’ny Plaza Ampefiloha no fotoana amin-dry zalahy eo anivon’ny tarika Quator square no hankalaza ny faha 1 taona ny alahady izao.
Antananarivo-Boriborintany Faha-3 Nodiovina ny tanàna, nesorina ireo petadrindrina
Nanala ireo petadrindrina sy nanadio nanomboka teo amin’ny tetezan’i Behoririka hatrany Besarety ny avy ao amin’ny boriborintany fahatelo ao anatin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) ny sabotsy 22 septambra 2018 teo, nanomboka tamin’ny 7 ora sasany maraina.